Qufulka xannibaadda: HC waxay weydiisatay Maha inuu ka jawaabo qirashada napkin santa
Mumbai, May 29 (PTI) Maxkamadda Sare ee Bombay ayaa jimcihii xukuntay xukuumadda Maharashtra inay ka jawaabto codsi ay ku doonayso inay ku sheegto inay ku dhawaaqdo xafaayadda nadaafadda inay tahay badeecad muhiim u ah iyo sahaydooda ay siiso haweenka saboolka ah iyo kuwa baahan iyadoo ay jirto musiibada COVID-19. Codsiga, oo ay gudbinayaan ardayda sharciga ...
Waqtiga la tuuri karo Pants waxay keydisaa safarkaaga ama Socdaalka Ganacsiga
Waqtigeyga waxaan helay bilo kahor intaanan gaarin 10 sano, sidaa darteed waxaad u maleyn laheyd inaan heli lahaa dhiig-baxan-siilka-siilka-bil walba hadda. Laakiin wali, waa xanuun ku dhaca ** waqti kasta. Ma ihi taageere weyn oo suufka tamarta, inta badan maxaa yeelay waxaan qabaa xoogaa aan walwal lahayn 'TSS-walwal ...
Diaper Deseper Diaper Diaper Diaper Diaper ee Da 'weyn
waxaa maamula 20-05-21
Habka / Tallaabada 1: Marka hore, xafaayaddaha dadka waaweyni waa fududahay in la isticmaalo. Difaacayaasha bini-aadamka ee aadanaha bini-aadamku way ka duwan yihiin xafaayaddaha ilmaha. Ku habboonaanta xafaayaddaha dadka waaweyni aad ayey muhiim u tahay. Si taas loo gaaro, qaabka iyo qaab-dhismeedka xafaayadda qaangaarka ayaa si taxaddar leh loogu talagalay. Calaamadaha dhexda dhexda waa la dhejin karaa ...
Tuurista xilliga caadada ee haweenka ee shaqaalaha Caafimaadka
Sanadkii 2020 ganacsiga oo dhami wuu gaabisyey jacaylka Covid-19, Shiinaha waa la xakameeyay, nolosheena nabada waa in lagu ixtiraamaa shaqaaleheena caafimaad ee geesinimada leh, Mudada caadada ee caadada ayaa ka caawin karta iyaga in ay xirato lebiska difaaca, caadadeena caadada waxay qaadan kartaa 650ml dareere ugu yaraan, habeyn ama 8 saacadood ...
Maxuu yahay ilmaha yar ee loo tuuraa ilmaha hoostooda?
Waa maxay suufka kaadida la tuuri karo Qaar ka mid ah hooyooyinka waligood waligood isticmaalin suufka kaadida, mana garan karaan waxa ay tahay kaadida la tuuro. Xaqiiqdi, maadaama ilmuhu dhasho, miskaha kaadida ayaa la istcimali karaa ilaa ilmuhu ka gaaro 2 ama 3 sano jir markii uusan ka sii raadin sariirta. Waraaqaha wax lagu qoro ma aha xafaayad ama xafaayad. Kuwa m ...
Jiangsu Debang Sanitary Co., Ltd waxay maalgelisay Jiangxi Yoho Technology Co., Ltd 2018
Jiangsu Debang Sanitary Co., Ltd taasi waa warshadeena jiangsu, wax soo saarka ugu weyn waa la iska tuuri karaa xafaayadda ilmaha, dharka tababbarka ilmaha iyo waxyaabaha kale ee fayodhowrka ilmaha, sanadka 2018 wuxuu maal galiyay jiangxi yoho technology co., Ltd, oo ku yaal magaalada jiujiang, jiangxi provience, taas oo ah ku takhasusay haweenka aniga ...
Ma rabtaa inaad xirato maaskaro? Dhismaha, dhismaha, adeegga iyo warshadaha kale ee looga hor tago laguna xakameynayo diiradda? Maamulka ayaa talo siiya!
Bishii Maajo 17keedii, habka wadajirka ah ee kahortagga iyo xakameynta ee golaha gobolka ayaa qabtay shir-jaraa'id si ay u soo bandhigaan ka-hortagga joogtada ah iyo xakameynta covid-19 iyo kor u qaadista caafimaadka shaqada. Marka loo eego baahida loo qabo in la xidho maaskaro, maxaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah la siiyo ka hortagga iyo xakameynta ...
Maaskaro ku saabsan korantada, Kheyraadka ama gimmick-ka?
Sanadka 2020 waxaa loo xusayaa inuu yahay sanad markii adduunka uu ku dhacay mugdi cudurka faafa. Nasiib wanaagse, waddankeenu si dhakhso leh ayuu uga fal-celiyey oo wuu ka adkaan doonaa sheekada coronavirus-ka cusub kharash kasta. Hadda, waxaan durba arki karnaa iftiinka ka hor waagii hore. Hadaad rabto inaad tiraahdo shantan bilood ...
Mashiinka Maska Maska Maska ee Kafurou Yoho ee loogu talagalay Coronavirus Covid-19 sanadkii 2020
Maskaxda 3 Flat Masks loogu talagalay shaqaalaha daryeelka aan caafimaadka ahayn, ee lagula dagaallamayo Coronavirus. Sidee Wejiga Masku u Shaqeeyaa Markii qof qaba COVID-19 uu qufaco, hindhiso, ama hadlo, wuxuu u soo diraa dhibco dhibco leh coronavirus hawada. Halkaas ayaa maaskaro ku caawin kara. Maaskaro wajiga daboola afkaaga iyo ...
Tuurista dharka ama dharka wax lagu tuuro, suufka iyo koobabka caadada, kee baad jeceshahay?
Waqtiga cusub ee la Isticmaali karo Xilliga caadada ee tuurista tuurista Gabdhaha Dumarka intooda badan ee iibsada waqtiyada xiisaha haweenka ayaa helaya sababta oo ah waxay yihiin kuwa dib loo isticmaali karo oo waara. Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu badbaadin karaan lacag waqti ka dib maadaama aad wax badan ku kici doontid tampons-ka la tuuro iyo pads-ka. Laakiin miyaad ogeyd inaad iibsan karto dis ...
Davieer Daadiye Xilliga Caadada Dharka ee Shiinaha Soo Saara
Muddada caadada ah ee la tuurayo Dharka labka ee dharka la dhigto ayaa ku soo laaban doona qulqulkaaga habeenka iyadoo aan qoyaan la helin, sida hurdo daruur jilicsan. Davieer (Jiangxi Yoho Technology Co., sumadda gaarka loo leeyahay ee LTD) ayaa sameeya khad loogu talo galay caadada dumarka. Saddex Cabbir ee loo yaqaan 'Panties Panties' waa la dooran karaa, Cabbirkiisu waa 660 * 530mm, dhererka ...
Maqnaanshaha jiilka saddexaad ee muddooyinka fayadhowrka
Maqnaanshaha jiilka saddexaad ee muddooyinka fayadhowrka nadaafadda Faa'iidada: 1; Yaraynta qaab dhismeedka aasaasiga ah ee alwaaxa alwaaxa + Qaabka dhismeedka 'SAP', qaab dhismeedka aasaasiga oo buuxa. 2; dib u cusbooneysiin iyo neefsasho leh oo leh 4,000 oo hawo-mareenkiiba laba jibaaran, deg deg badan, oo aan cufan. 3; p ...